Saaxiibada Gobolka Waqooyi - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > Isbahaysiga Gobolka Waqooyi
Waqooyiga CO Fellow
Location: Waqooyiga Colorado, oo ay ku jiraan Larimer, Weld, Logan, Boulder, Morgan, Washington, Yuma counties, iwm
Waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa dadka ka socda Degmooyinka Weld, Morgan iyo Yuma inay codsadaan.
Aagga(yada) barnaamijka iyo soo koobida guud: Mas'uul ka ah taageeridda xubnaha CIRC iyo bulshooyinka soogalootiga maxalliga ah ee Waqooyiga Colorado. Ka hawlgeli xubnaha CIRC ee gobolka iyo bulsho weynta si ay u abaabulaan ololaha istiraatijiyadeed ee CIRC iyo hawlaha dhisitaanka.
Warbixinnada ku saabsan: Abaabulaha Gobollada Waqooyi
Wehelka CIRC ee Waqooyiga ayaa mas'uul ka ah la shaqaynta Qabanqaabiyaha Gobolka Waqooyi si uu u taageero xubnaha CIRC ee qaybaha miyiga ee Waqooyiga CO dhisidda bulshada deegaanka, bixinta tababarka xubnaha, iyo hirgelinta ololaha mudnaanta istaraatiijiga ah ee CIRC.
Caawinta COVID ee bulshooyinka soogalootiga ee Waqooyiga CO
Kordhi wacyigelinta bulshada, xooji isku xidhka jira, oo ku beer xidhiidho cusub bulshooyinka soogalootiga ah, gaar ahaan bulshooyinka miyiga ah, ee Waqooyiga Colorado. Tan waxaa ku jira 1:1s joogto ah oo leh xiriiryo cusub iyo kuwa jira iyo sidoo kale ka qeybgalka iyo ka qeybgalka dhacdooyinka maxalliga ah.
Xoojinta xiriirka shaqo ee mudada fog iyo isku xirka ururada soo galootiga ee jira iyo kuwa soo baxaya ee ku saleysan gobolka Waqooyi iyo qorista ururo cusub si ay xubno uga noqdaan CIRC.
Taageer Abaabulaha Gobolka Waqooyi si uu u abaabulo oo u martigeliyo shirar goboleed oo saddexdii biloodba mar ah.
Shaqada isku xirka ururada maxaliga ah, iyo CIRC North Organizer (marka ay khuseyso).
Isku xidhka iyo wargelinta gobolka ka dhig inta Qabanqaabiyaha Gobolka Waqooyi uu fasax ku maqan yahay.
Murashaxu waa inuu ku noolaado waqooyiga Colorado
Si aad u dalbato, fadlan emayl u dir jobs@coloradoimmigrant.org resume-kaaga iyo jawaabahaaga ku saabsan su'aalaha ku lifaaqan ilaa Juun 12, 2022